iPhone: Olee otú Idozi Black ihuenyo nke Ọnwụ
The nwa ihuenyo ọnwụ bụ a onu ọtụtụ uchu iPhone ọrụ nwere na ihu bụla ugbu a na mgbe ahụ. Ọ bụ a ọnọdụ nke na iPhone a sụgharịrị na-abaghị uru site ọdịdị a nwa ihuenyo. Ihuenyo mgbe ụfọdụ nwere ike nwere ihe Apple logo na nwa ndabere mgbe sometimesit nwere ike ịbụ kpamkpam oghere.
The nwa ihuenyo ọnwụ nwere ike na-egosi ruru ka a dum ọtụtụ ihe si anụ ahụ mmebi a software malfunction. Ụfọdụ n'ime ihe nkịtị mere na-kọwara n'okpuru:
1. Nkịtị Mebiri: Ọ bụ ezie, iPhones bụ inogide ngwaọrụ ma idobe ihe iPhone bụ otu n'ime isi na-akpata nke ọdịdị nke a nwa ihuenyo ọnwụ.
2. Ike Hardware components: Ọ bụrụ na ị na-eji gị iPhone maka ogologo oge na-enweghị enye ya oge ụfọdụ anya, ngwaike components nke iPhone wee mesiri na-eme ọdịdị a nwa ihuenyo ọnwụ.
3. Software malfunction: Black ihuenyo ọnwụ nwekwara ike ịbụ a n'ihi nke a glitch na software ma ọ bụ iOS gị iPhone.
4. Ngwa incompatibility: Ịnwa na-agba ọsọ ngwa ọdịnala na e nwere ike na-ewere ukwuu ịkpatara gị iPhone si software na ngwaike nwere ike ịkpata ọdịdị nwa ihuenyo ọnwụ.
5. egbu egbu Njehie: egbu egbu njehie nwere ike na-mere ka a N'ihi nke oké drainage nke batrị ma ọ bụ ihe dị mfe dị ka ịmafe n'etiti abụọ ngwa nwekwara ike ịbụ maka ọdịdị nwa ihuenyo ọnwụ.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-agba ọsọ ka ha kacha Apple ụlọ ahịa mgbe ha na ekwentị amalite flaunting a nwa ihuenyo ọnwụ ma ọ bụghị ha niile nwere ike imeli ịrụzi ebubo. Ọ bụrụ na ị bụ otu ndị dị otú ahụ iOS ngwaọrụ njirimara ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nanị oké ọchịchọ iOS ngwaọrụ nwe onye chọrọ na-elekọta nsogbu ya niile ya onwe ya, Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone data mgbake) bụ maka gị. Ọ na-ewe elekọta niile software glitches na nwere ike ime ka ihe iOS ngwaọrụ nwere nwa ihuenyo nke ọnwụ na eliminates ha site ngwaọrụ. Mgbe Dr.Fone na-eme na ngwaọrụ, Ọ na-amalite na-agba ọsọ na-ejikarị, dị ka ọ bụ tupu ọdịdị nke nwa ihuenyo ọnwụ.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụ onye nwere ọgụgụ isi data mgbake software. Ọ na-enye ọrụ atọ nhọrọ naghachi ha data. Ha nwere ike ma naghachi ha data si iCloud, iTunes ma ọ bụ iOS ngwaọrụ onwe ya. Niile ụdị data ntụgharị music, photos na ozi ederede wdg nwere ike mfe natara iji Wondershare Dr.Fone. Wondershare Dr.Fone Dị na $69.95 maka otu ojiji onye ikike.
Iji malite agbake ngwaọrụ gị si nwa ihuenyo ọnwụ iji Wondershare Dr.Fone, na-eso ntụziaka ndị a:
1. Download na wụnye Wondershare Dr.Fone gị Mac. Mgbe nwụnye zuru ezu, jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị MAC site n'ọnụ eriri USB na ẹkedori Dr.Fone.
4. Ozugbo download completes, Wondershare Dr.Fone ga-amalite ịrụzi gị iOS. Ọ ga-eme ihe dị mkpa iji na-enweta ngwaọrụ nke nwa ihuenyo ọnwụ mode na-enweghị na-ebibi gị data. N'ihe na-erughị nkeji 10, ị ga-a ozi na-ekwu na ngwaọrụ gị na-ibidogharịa nkịtị mode.
Ọ bụrụ na i sowo niile n'elu kwuru banyere ntụziaka ọma, gị iOS ngwaọrụ ga-elu na-agba ọsọ n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ikpe, ọdịdị nke kpatara na emewo ka ngwaọrụ gị nwere nwa ihuenyo ọnwụ nwere ike ịbụ ngwaike metụtara. Iji nweta ngwaike nsogbu ota, ị ga-mkpa na-eje ije gị obodo Apple ahịa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ Apple ngwaọrụ arụzi dị ka kwa na gị onwe gị mma.
Olee otú zere na-iPhone n'ime nwa ihuenyo ọnwụ
Dị ka a kọwara ná mmalite, nwa ihuenyo ọnwụ nwere ike mere site ma software na ngwaike nsogbu. N'ihi ya, ụfọdụ ịkpachara anya na-elekọta kwesịrị ka a na-eme ma na hotara na mbụ ebe izere-enweta ihe iPhone n'ime nwa ihuenyo ọnwụ mode.
1. Zere wụnye ngwa na inwe ihe ndakọrịta nke dị ka ọ pụrụ ịkpata a oké njọ iOS njehie nke nwere ike ime ka nwa ihuenyo ọnwụ.
2. Nye gị iPhone ụfọdụ fọdụrụ site mbịne ya anya n'ụzọ kwesịrị ekwesị (site na-ejide ala ike bọtịnụ) Ozugbo a ọnwa. Ka ọ laghachi azụ na mgbe 10-15 sekọnd.
3. Nchegbu na batrị na ngwaike components nwekwara ike na-isi na-akpata nke nwa ihuenyo ọnwụ. Ya mere, lezienụ anya maka ihe ịrịba ama nke na-egosi na ị na-etinye kwa nrụgide dị ukwuu na gị iPhone.
4. Zere idobe gị iPhone jidesie ike na-ebupụta dị ka osisi osisi n'ala, ihe wdg The mmetụta mere site dị otú ahụ a dobe n'ihi na malfunctioning ngwaike na nwere ike ime ka a nwa ihuenyo ọnwụ.
5. Zụrụ a kwesịrị ekwesị n'echebe maka ekwentị gị nke ga-ebelata mmetụta na n'elu bụrụ na nke a dobe.
> Resource> Utility> otú ndozi Black ihuenyo nke Ọnwụ